सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा खुलेर छलफल गर्न थाले महिला र किशोरी – जनस्वास्थ्य खबर
सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा खुलेर छलफल गर्न थाले महिला र किशोरी
अर्घाखाँची १९ वैशाख । अर्घाखाँची जिल्लाका बिभिन्न ठाउँका युवा युवती, किशोरी, र महिलाहरुले, प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा खुलेर छलफल गर्न थालेका छन् । पर्यावरण सचेतन समूहले अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरेको सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी अन्तरक्रया कार्यक्रमका सहभागीलहरुले खुलेर छलफल गर्न थालेका हुन । जिल्लाको भुमिकास्थान नगरपालिकाको ढाकावाङ्ग, धारापानी, र मालारानी गाउँपालिको हसंपुर र वाँगीमा भएको प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन बारेमा सहभागी सुरुमा लजाउने गरे पनि कार्यक्रमको महत्व र फाइदा बुझेपछि खुलेर वहस र छलफल गर्न थालेका हुन ।
सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा खुल्ला रुपमा छलफल गर्नु हँुदैन भन्ने मानसिकता थियो । यस्तो महत्वपूर्ण पक्षलाई लाज र घृणाको रुपमा हेरीयो यस्ता विषयमा स्थानीय स्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले थप जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी महिला र किशोरीहरुले भने–‘गाउँमा सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम भएका थिएनन् हामीले महसुस गरे पनि खुल्ला छलफल गर्ने अवर पाएका थिएनाँै , यो हामीलाई अवसर हो । यस्ता कार्यक्रम टोल टोलमा पु¥याउनुपर्छ । कार्यक्रमका सहभागी भुमिकास्थान नगरपालिका–४ धारापानीकी यमकला बञ्जाडेले भनिन् ‘हामी महिला स्वास्थ्य स्वायम सेविका भए पनि सुरक्षित गर्भपत, यसको कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकार थिएनाँै । यस विषयमा ग्रामिण स्तरका महिलाहरुलाई बुझाउन सकिएको थिएन् । कार्यक्रमबाट हामीलाई पनि प्रयाप्त ज्ञान भयो । अव गाउँ स्तरका महिलाहरुलाई यस बारेमा बुझाउने उनले प्रतिवद्धता गरिन् ।
मालारानी गाउँपालिका–६ हसंपुरकी सहभागाी पत्रित्रा आचार्यले ‘हामीहरुलाई सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा ज्ञान थिएन् । कति हप्ता सम्मको सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ,? कानुनी व्यवस्था के छ ? सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ उलब्ध छ ? भन्ने ज्ञानको अभाव थियो । यो कार्यक्रमले हामीलाई सचेत गरायो । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हामीले पाएको जानकारी, र ज्ञान सीपलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याइ प्रतक्ष्य फाइदा लिने उनले बताइन ।
भुमिकास्थान नपा–१ की मनिता नेपालीले २४ घण्टे प्रसुती सेवा र सुरक्षिति गर्भपतनको बिषयलाई सँगै जोडेर लैजानुपर्ने बताइन । २४ घण्टे प्रसुती सेवा सञ्चालन भएको स्वाथ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिन सके सेवा प्रभावकारी हुने र लक्षित बर्गले सेवा राम्रो पाउनेमा उनको जोड थियो ।
पर्यावरण सचेतन समूहका सचिव नारायण भुसालले गाउँ स्तरका महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ सुरक्षित गर्भपत जस्ता विषयमा सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए । कानुनी ज्ञानको अभावले घरमा दुइ तीन जना वच्चा हुँदाहुँदै महिलाहरु बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । उनले भने कानुनी व्यस्था अनुसार महिलाहरुलाई आफनो अधिकारको बारेमा सचेत गराइ उनीहरुको इच्छाका आधारमा राज्यले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कार्यक्रमको सहजीकरण स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्जहरुले गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा मालारानी गाउँपालिकाका वडा नं. ६, ७, ८, र ५, भुमिकास्थान नगरपालिका १, २ , र ४ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कार्यक्रम समय सान्दर्भिक भएकोले ग्रामिणस्तरमा अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले यो कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै सवै किमिका सहयोग गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्याक्त गरे ।
Related Topics:Jana Swasthya khabarjanaswasthya